China Women windproof windo jaketị ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Na-ada
Nkebi: Uwe elu nke ndị inyom na-agbada
Ihe mejupụtara: 100% polyester
Size iche: 155-195
Etiti oge: 55days mgbe ekwesịrị ka akwadoro
Ngwaahịa Multi Angle
Gafere GB / T 19001-2016 / ISO9001: 2005 njikwa njikwa mma
N'oge oyi, jaket ala agbadatala ejiji dị mkpa maka onye ọ bụla iji kpoo ọkụ. N'ezie, jaket ala abụghị naanị na ọ na-arụ ọrụ nke ikpo ọkụ, kamakwa ọ bụ ihe nnọchianya nke usoro a. Uwe oyi na agba niile dị ogologo na nke dị mkpụmkpụ na-eme ka ị na-aga n'okporo ámá ma na-adọta mmasị ndị na-agafe.
Nchịkọta ọrụ 01: jaket ịke jaket dị mkpụmkpụ jupụtara na mmadụ na egwuregwu. A na-ejikọ ya na elu ogologo iji mee ka echiche nke ndị isi dị elu ma kpuchie anụ nke ukwu na oke. Nchikota nke acha uhie uhie, ocha na acha anụnụ anụnụ, odidi nke omumu ihe omumu nke ndi Britain di nfe n’ihu gi. Ihe osise a na-adọta nwere ezigbo mmetụta na-eguzogide ifufe, ụdị dị mkpụmkpụ na-eme ka ọmarịcha obere eriri gị pụta ozugbo!
Nchịkọta ihe nchịkọta 02: mm na ọnụ ọgụgụ dị mma maka jaket ala na akwa Matt na-enweghị mmụba ọhụụ. Soft pink ejiji kpuchie ala jaket, nkịtị, dị mfe ịke, enweghị ike zoo zoo mara mma, na a ụzọ nke awl ogologo ọkpa na ìhè egwuregwu akpụkpọ ụkwụ, a oyi na mara mma.
Nchịkọta ọrụ 03: usoro ojii na oji na-acha ọcha na-enwekwu ọgụgụ isi, ikpughe akpụkpọ ahụ nwere ike ime ka ụkwụ dị gịrịgịrị. Ọ bụrụ na ụmụnne nwanyị ndị na-atụ egwu oyi anaghị anwa anwa nwaa oyi n'ụzọ dị mfe, tinye otu ụzọ pantyhose siri ike.
1. Anyị nwere Independent imewe team.To enye gị fashionable na akwụkwọ imewe.
2. Anyị nwere ọkachamara QC otu iji hụ na ngwaahịa gị dị mma.
3. Anyị nwere ọkachamara patternist otu na-uwe gị na ezi udi.
4. Anyị nwere ọkà akwa akwa mkpara ga-enye gị zuru okè okokụre ngwaahịa
Q: Otu esi amalite oru?
A: Iji malite ọrụ gị, biko zitere anyị ihe osise eserese na ndepụta nke ihe, oke na imecha. Mgbe ahụ, ị ​​ga-enweta nkwupụta ahụ n’aka anyị n’ime awa 24.
Ajụjụ: Anyị amabeghị njem ụgbọ njem mba ofesi, ị ga - ejikwa ihe niile eji arụ ọrụ?
A: Kpamkpam. Ọtụtụ afọ ahụmahụ na ogologo oge na-arụkọ ọrụ forwarder ga-akwado anyị zuru ezu na ya. I nwere ike na-agwa anyị na nnyefe ụbọchị, na mgbe ahụ ị ga-enweta ngwongwo na ụlọ ọrụ / n'ụlọ. Nsogbu ndị ọzọ hapụrụ anyị.
Ajụjụ: Ego ole ka ị ga-ewe maka nlele, oge ole ka a ga-ewe maka nlele
A: Maka uwe uwe anyị ga-ajụ oge 3 nke ego BULK. Emekarị maka n'omume ọ na-ewe 7days.
Nke gara aga: Igodo Na-agbada
Osote: Jaketị ndị na-enweghị windo